အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (2018) တွင် Neurocognitive ယန္တရားများ - Prause et al ခွဲခြားစိတ်ဖြာကောက်နုတ်ချက်, 2015 - ။ သင့်ရဲ့ဦးနှောက် Porn တွင်
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (2018) တွင် Neurocognitive ယန္တရားများ - Prause et al ခွဲခြားစိတ်ဖြာကောက်နုတ်ချက်, 2015 ။
ကောက်နုတ်ချက်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း Prause et alကိုးကားသောအရာ။ , 2015 ( 87)
Prause နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကကောက်ယူ EEG သုံးပြီးတစ်ဦးကလေ့လာမှု, ၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေခံစားရသူကိုတစ်ဦးချင်းစီ, ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ဒုက္ခဆင်းရဲမခံစားရဘူးသူတစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုနှိုင်းယှဉ်ပါကဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကျလာသောပိုမို / သာ. ကြီးမြတ်အမြင်အာရုံဆွလိုအပ်နိုင်ပါသည်ကြောင်းအကြံပြု ။ Hypersexual သင်တန်းသားများကို-တစ်ဦးချင်းစီ '' ကြုံနေရပြဿနာများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိ '(Mလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေထိတွေ့သည့်အခါ = တစ်ပတ်ကို 3.8 နာရီ) တူညီသောပုံရိပ်တွေထိတွေ့သောအခါနှိုင်းယှဉ်အုပ်စုတစ်စုကိုပြု၏ထက် EEG signal ကိုနှောင်းပိုင်းအပြုသဘောအလားအလာဖြင့်တိုင်းတာလျော့နည်းအာရုံကြော activation () -exhibited ။ (က cue သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်အဖြစ်။ ပိုပြီး Gola et al တွေ့မြင်များအတွက် ) ဒီလေ့လာမှုမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အနက်ပေါ် မူတည်. တွေ့ရှိချက်စှဲ  အတွက်လေ့သက်ရောက်မှုကိုညွှန်းသည်အခြားလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုထောကျပံ့နိုငျသညျ။ 2015 ခုနှစ်တွင် BANCA နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် CSB နှင့်အတူယောက်ျားဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုပိုမိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ပုံရိပ်တွေ  မှအကြိမ်ကြိမ်ထိတွေ့သောအခါ dACC အတွက်လေ့ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များတွေ့ရှိချက်သရုပ်ပြကြောင်းလေ့လာသည်။ အဆိုပါဖျောပွလေ့လာမှုရလဒ်များမကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအားဖြင့်လိင်နှိုးဆွခံရဖို့ သာ. ကြီးမြတ်ဆွဘို့လိုအပ်ကြောင်းတိုးမြှင့်, ဖြစ်နိုင်သည်တိုးလာလေ့နှင့်သည်းခံစိတ်မှဦးဆောင်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုလျော့နည်းကျဆင်းစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော် longitudinal လေ့လာမှုများထပ်မံဒီဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်ဖို့ညွှန်ပြနေကြသည်။ အတူတူယူယနေ့အထိ neuroimaging သုတေသနထိခိုက်စေလေ့အပါအဝင်ပြောင်းလဲဦးနှောက်ကွန်ရက်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါး, လောင်းကစားများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းစှဲနှင့်အတူအယူအဆကြောင့် CSB ရှယ်ယာတူညီများအတွက်ကနဦးအကူအညီအထောက်အပံ့များပေးလျက်ရှိသည်။
comments: လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏စာရေးသူသည်အခြားသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်စာတမ်းများနှင့်သဘောတူသည် - ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015: အောက်ပိုင်း EEG ဖတ်ဘာသာရပ်များပုံမှလျော့နည်းသတိထားရမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလို။ သူတို့ (habituated သို့မဟုတ် desensitized) ပျင်းခဲ့ကြသည်။ ဦးဆောင်ရေးသားသူ (နီကိုးလ် Prause) ဤရလဒ်များကို "porn စွဲ debunk က" တောင်းဆိုဆက်လက်ပေမယ့်အခြားအသုတေသီများ over-the-ထိပ်တန်းအခိုင်အမာသူမ၏သဘောမတူ။ "ဘာ - သင်ကိုယ်သင်မေးပါရန်ရှိသည် တရားဝင်သိပ္ပံပညာရှင် သူတို့ရဲ့တည်းသောပုံမှန်မဟုတ်လေ့လာမှုတစ်ခု debunked မူကြောင်းကိုတောင်းဆိုမယ်လို့ လေ့လာမှုကောင်းစွာထူထောင်လယ်ပြင်? "။
Prause N ကို, သံမဏိ VR, Staley ကို C, Sabatinelli: D, Proudfit GH ။ ပြဿနာအသုံးပြုသူများသည်နှင့် "porn စွဲ" နဲ့ကိုက်ညီမှုထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအားဖြင့်နှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာများ Modulation ။ Biol Psychol ။ 2015; 109: 192-9 ။
ADDED context, အပြည့်အဝအတူတကွလေ့လာရန်
အောက်တိုဘာလ 2018, လက်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအစီရင်ခံစာများ
ပြန်လည်သုံးသပ်၏ရည်ရွယ်ချက်: လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (CSBD) ၏ neurobiological ယန္တရားများကိုရည်မှတ်နောက်ဆုံးပေါ်တွေ့ရှိချက်အကျဉ်းချုပ်နှင့်အခြေအနေကို၏အဖြေရှာတဲ့ခွဲခြားဖို့အနာဂတ်သုတေသနတိကျတဲ့အဘို့ထောက်ခံချက်ပေးသည်။
မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များ: နေ့စွဲစေရန်, အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အများဆုံး neuroimaging သုတေသနထပ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအခြေခံယန္တရားနှင့် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲအထောက်အထားပေးအပ်ထားပါတယ်။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပစ္စည်းဥစ္စာ, လောင်းကစားများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းစှဲနဲ့တူပုံစံများအတွက် sensitive ကလေ့, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ dyscontrol နှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့်ပတ်သက်နေဦးနှောက်ဒေသများနှင့်ကွန်ရက်များအတွက်ပြောင်းလဲလည်ပတ်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ CSB features တွေချိတ်ဆက် Key ကိုဦးနှောက်ဒေသများအတွက်နျူကလိယ accumbens အပါအဝင်တိုကျရိုကျနှင့်ယာယီ cortical, amygdala နှင့် striatum, ပါဝင်သည်။
အနှစ်ချုပ်: CSBD နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုအကြားအများအပြားတူညီရှာဖွေတာအများကြီးမှ neuroscience သုတေသနနေသော်လည်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ထဲမှာ CSBD ပါဝင်သည် ICD-11 တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်။ ယခင်သုတေသနအခြေအနေကိုအချို့ကိုအခြေခံယန္တရားကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်ခဲ့သော်လည်းနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအပြည့်အဝကဤဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်သဘောပေါက် CSBD ပတျဝနျးကငျြခွဲခြားပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်နေပါသည်။
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, hypersexuality, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse, nymphomania, ဒါမှမဟုတ် Out-of-ထိန်းချုပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ [1-27] အဖြစ်လူသိများသောအခြေအတင်ဆွေးနွေးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ တိကျသောနှုန်းထားများန့်အသတ် epidemiological သုတေသနပေးထားမသိရသေးသော်လည်း CSB [3-6] ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူဦးရေရဲ့ 28-32% ကိုထိခိုက်ဖို့ခန့်မှန်းနှင့်အမျိုးသမီးထက်အမျိုးသားများတွင်ပိုပြီးဘုံဖြစ်ပါတယ်။ CSB [4-6, 30, 33-38] နှင့်အတူယောက်ျားမိန်းမတို့အားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်ဆက်စပ်သောဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ချွတ်ယွင်း, ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က၏လာမည့် 11th edition အတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder (CSBD) အပါအဝင်အကြံပြုထားပါတယ်ကြောင့် ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး (6C72)  ။ ဒီအပါဝင်, unserved လူဦးရေအဘို့အကုသမှုမှဝင်ရောက်ခွင့်တိုးမြှင့်ကူညီရန်အကူအညီတောင်း-ရှာနဲ့ဆက်စပ်အမည်းစက်, အရှက်ကွဲလျှော့ချ, ဖျော်ဖြေပွဲသုတေသနအားထုတ်မှုမြှင့်တင်ရန်, ဤအခြေအနေပေါ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံစိုက်မှုတိုးမြှင့် [40, 41] စကားလုံး၏ကနောက်ဆုံး 20 နှစ်ကျော်ရှိရှိသည်အသိအမှတျပွုသငျ့သညျ မကြာခဏ nonparaphilic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (ဥပမာမကြာခဏပေါ့ပေါ့ / အမည်မသိလိင်, ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း) တွင်အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ dysregulated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောအဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးကွဲပြားခဲ့ကြ။ လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့ကျနော်တို့ပြဿနာ, အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖော်ပြတစ်ခုကျယ်ပြအသုံးအနှုန်းအဖြစ်ဟူသောဝေါဟာရကို CSB ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
CSB တစ်ဦးစိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive-spectrum ကိုရောဂါတစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်စွဲလမ်းအပြုအမူ [42, 43] အဖြစ် conceptualized ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CSBD ၏ရောဂါလက္ခဏာများ 2010forthe အတွက်အဆိုပြုထားသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ DSM-5 hypersexual ရောဂါ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေကို  ။ Hypersexual ရောဂါနောက်ဆုံးမှာထံမှအမေရိကန်စိတ်ရောဂါ Association ကဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည် DSM-5 မျိုးစုံအကြောင်းပြချက်သည် ဖြစ်. , neurobiological နှင့်မျိုးဗီဇလေ့လာမှုမရှိခြင်းအရှိဆုံးမှတ်ချက်ချအကြောင်းပြချက် [45, 46] အကြားခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီက CSB, လူကြိုက်များတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးသိပ္ပံနှစ်ဦးစလုံးအတွက်မှာအန္တရာယ်နှင့် underserved အုပ်စုများထိခိုက်အထူးသပေးသောကျန်းမာရေးညီမျှမှုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ( "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ", "hypersexuality", "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive" လေ့လာနေသောသူတို့အားအပါအဝင်) CSB ၏လေ့လာမှုများအတွက်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတိုးနေသော်လည်းအတော်လေးနည်းနည်းသုတေသန CSB [4, 36] ၏အာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံပြုလေ့လာခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် CSB ၏ neurobiological ယန္တရားများသုံးသပ်ပြီးနှင့် CSBD ၏အဖြေရှာတဲ့ခွဲခြားနှင့်ပတ်သက်သောအထူးသဖြင့်သည်အတိုင်း, အနာဂတ်သုတေသနများအတွက်အကြံပြုချက်များပေးစွမ်းသည်။
အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုလာဘ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဦးနှောက်ဒေသများ  ကမူလ, ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုနားလည်ဘို့အရေးကြီးသောများပါတယ်။ တစ်ဦးလို့ခေါ် '' ဆုလာဘ်စနစ်က '' အတွင်းအဆောက်အဦအလားအလာထိုကဲ့သို့သောစှဲအတွက်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးအဖြစ်လှုံ့ဆော်မှု, အားဖြည့်ခြင်းဖြင့် activated နေကြသည်။ အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုလာဘ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အဓိက neurotransmitter  အထူးသဖြင့် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နှင့်နျူကလိယ accumbens နှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်သွယ်မှု (NAc) ပါဝငျသော mesolimbic လမ်းကြောင်း, အဖြစ် amygdala, hippocampus နှင့် prefrontal cortex အတွင်း, dopamine ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုဆောင်း neurotransmitters နှင့်လမ်းကြောင်းအပြောင်းအလဲနဲ့ဆုလာဘ်များနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်း, dopamine လူသားတွေအတွက်တစ်ဦးချင်းမူးယစ်ဆေးနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းအတွက်ကွဲပြားဒီဂရီပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့ပေးထားသောထိုအရမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစား [49-51] တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။
 ကမက်လုံးပေး salience သီအိုရီအရကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ယန္တရား ( 'လို') ဆုလာဘ်ရရှိရန်လှုံ့ဆျောမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်၏အမှန်တကယ် hedonic အတွေ့အကြုံကို ( 'အကြိုက်') ။ အနီးကပ် dopaminergic အဆိုပါ ventral striatum (VStr) တွင် neurotransmission နှင့် orbitofrontal cortex နှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါ '' လို '' သွားရမည်အကြောင်း, လိုသောအရင်းခံနဲ့ပျြောမှေ့စခံစားချက်တွေကိုဖန်တီးဆက်ကပ်အပ်နှံကွန်ရက်များ [49, 53, 54] ပိုမိုရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။
VStr ဆုလာဘ်နှင့်သက်ဆိုင်သောဓာတ်ပြုခြင်းသည်အရက်၊ ကိုကင်း၊ opioid သုံးစွဲမှုရောဂါနှင့်လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါစသည့်စွဲခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ Volkow နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်စွဲလမ်းမှု၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းလေးခုကိုဖော်ပြသည်။ (၁) cue reactivity နှင့်တပ်လိုခြင်း၊ (၂) လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်း၊ (၃) hypofrontality နှင့် (၄) စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များပါဝင်ခြင်း။ CSB ၏သုတေသနသည် cue ဓာတ်ပြုခြင်း၊ CSB ၏ပထမ ဦး ဆုံး neuroimaging လေ့လာမှုများ dopamine-related လှုံ့ဆျောမှုစနစ်များပြောင်းလဲမှုများနှင့်ဆက်စပ်သောသတိထားအာရုံကြော sensitization အပေါ်အခြေခံပြီးသောမက်လုံးပေး salience သီအိုရီအပေါ်တစ် ဦး သတ်သတ်မှတ်မှတ်အာရုံနှင့်အတူ CSB နှင့်စွဲအကြားအလားအလာတူညီဆန်းစစ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြသည်။ ဤပုံစံတွင်စွဲလမ်းစေနိုင်သောမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ခြင်းသည်လှုံ့ဆော်မှုကိုလှုံ့ဆော်သောအပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုကိုမက်လုံးများစေခြင်း၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိန်းညှိသော ဦး နှောက်ဆဲလ်များနှင့်ဆားကစ်များကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ဒီထိတွေ့မှုကြောင့် ဦး နှောက်ဆားကစ်သည်စိတ်ခံစားမှု (သို့မဟုတ်ထိခိုက်လွယ်မှု) ဖြစ်လာနိုင်သဖြင့်ပစ်မှတ်ပစ္စည်းများနှင့်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များအတွက်ရောဂါဗေဒအဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုရပ်တန့်သော်လည်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်ရောဂါဗေဒမက်လုံး (လှုံ့ဆော်မှု) သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ ၎င်းတွင်သွယ်ဝိုက် (သတိမထားလိုသော) သို့မဟုတ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ (သတိတပ်မက်မှု) လုပ်ငန်းစဉ်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။ CSB ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်မက်လုံးပေးသောအဓိကကျသည့်ပုံစံကိုအဆိုပြုထားသည် [၁၊ ၂] ။
ဒေတာကို CSB များအတွက်မက်လုံးပေး salience မော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, Voon နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက dorsal anterior cingulate cortex (dACC) ပြသတိုးလာ VStr, dACC နှင့်ညစ်ညမ်းဗီဒီယို amygdala တုံ့ပြန်မှုမရှိဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နှင့်အတူ -Vstr -amygdala functional ဖြစ်စေ network က  .Men အတွက် cue-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုလေ့လာ ကလစ်များ။ ပိုကြီးတဲ့စာပေ၏ဆက်စပ်တွင်ဤတွေ့ရှိချက် [61, 62] လိင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-cue reactivity ကိုအကြီးအကျယ်ထပ်ဒေသများနှင့်ကွန်ရက်များပါဝင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ မပါဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နှင့်အတူယောက်ျားကိုလည်းညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုများပိုမိုမြင့်မားလို (ပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ) နှင့်တစ်ဦးမက်လုံးပေး salience သီအိုရီ  နှင့်ကိုက်ညီသောအနိမ့်အကြိုက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ အလားတူပင် Mechelmans နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအဖြစ် CSB နှင့်အတူယောက်ျားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့ဦးတည်ပြသတိုးမြှင့်အစောပိုင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲသော်လည်းမကြားနေတွေကို  လူနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်စှဲအတွက်မူးယစ်ဆေးတွေကိုဆန်းစစ်လေ့လာမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာတိုးမြှင်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအတွက်တူညီအကြံပြုအပ်ပါသည်။
2015 ခုနှစ်, Seok နှင့် Sohn သာ. ကြီးမြတ်လှုပ်ရှားမှု, မပါဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နှင့်အတူလူတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတုံ့ပြန်ထဲမှာ, dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC) တွင် caudate, ယုတ်ညံ့ supramarginal အဆိုပါ parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, dACC ၏ gyrus နှင့် thalamus လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ  ။ သူတို့ကအစ CSB လက္ခဏာတွေ၏ပြင်းထန်မှုဟာ dlPFC နှင့် thalamus ၏ cue-သွေးဆောင် activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 2016 များတွင်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက (အားဖြင့်အကဲဖြတ် CSB နှင့်အတူလူတို့တွင် Non-နှစ်သက်သောညစ်ညမ်းပစ္စည်းမှနှိုင်းယှဉ်ပါကဦးစားပေးညစ်ညမ်းပစ္စည်းများအတွက် VStr ပိုမို activation လေ့လာတွေ့ရှိခြင်းနှင့် VStr လှုပ်ရှားမှုအပြုသဘောကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏စွဲလမ်းအသုံးပြုမှု Self-အစီရင်ခံရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ ရေတိုကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းကျဘာ (s-IATsex) [64, 65] ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ။
Klucken နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များမကြာသေးမီက  ခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများကို (ဆုလာဘ်) ခန့်မှန်း Conditions တွေကို (ရောင်စုံရင်ပြင်) ၏တင်ပြချက်စဉ်အတွင်း amygdala ၏ပြသကျကွီးမွတျ activation မပါဘဲသင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နဲ့သင်တန်းသားများကိုလေ့လာသည်။ နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာထိုရလဒ်များ CSB လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကိုကြည့်နှင့်အတူပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ခြင်းနှင့်ယောက်ျားနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြား amygdala activation ဆန်းစစ်သည်အခြားလေ့လာမှုများအနေဖြင့်သူတို့အား [1, 67] တူသော .Using EEG, သံမဏိများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေဖို့ပိုမိုမြင့်မား P300 လွှဲခွင်ကြည့်ရှုလေ့လာကြသည် မူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာအမြင်အာရုံမူးယစ်ဆေးတွေကို processing ၏ကြိုတင်သုတေသနပြု [68, 69] နှင့်အတူ resonating, CSB နှင့်အတူပြဿနာများရှိခြင်းအဖြစ် Self-ဖော်ထုတ်တစ်ဦးချင်းစီအကြားကြားနေဓာတ်ပုံများကို) ။
2017 ခုနှစ်, Gola နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ  CSB မပါဘဲ CSB နှင့်လူတို့၏အဘို့အကုသမှုရှာကြံလူတို့တွင်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ Vstr တုံ့ပြန်မှုဆနျးစစျဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) သုံးပြီးလေ့လာမှုရလဒ်တွေကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ fMRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့လျှက်နေစဉ်ပါဝင်သူတစ်ဦးမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးတာဝန် [54, 70, 71] အတွက်စေ့စပ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီတာဝန်စဉ်အတွင်းသူတို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တွေကိုအားဖြင့်ရှေ့ပြေးခေါ်ဆောင်သွားသို့မဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ CSB နှင့်အတူယောက်ျားခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်းတွေကိုမှ VStr တုံ့ပြန်မှုအတွက်မပါဘဲ, ဒါပေမယ့်မပေးခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုရှိသူတို့ထံမှကွဲပြားပါတယ်။ ထို့အပြင် CSB မပါဘဲနှိုင်းယှဉ် CSB နှင့်အတူယောက်ျားအထူးသတွေကိုငွေကြေးဆုလာဘ်ခန့်မှန်းသူတို့အဘို့ခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်းခြင်းနှင့်မ သာ. ကြီးမြတ် VStr activation ပြသခဲ့သည်။ တွေကို (ငွေကြေးအကျိုးအမြတ် vs. ခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုခန့်မှန်း) မှဆွေမျိုး sensitivity ကိုခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေ ( 'လို'), CSB, တစ်ပတ်ကိုအသုံးပြုသောညစ်ညမ်းပမာဏ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အပတ်စဉ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ကြိမ်နှုန်းကြည့်ရှုတစ်ခုတိုးလာအပြုအမူလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်, CSB နှင့်စွဲလမ်းမှုကိုအကြားတူညီ, CSB အတွက်လေ့လာသင်ယူတွေကိုများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍများနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှကုသမှုချဉ်းကပ်အကြံပြုအထူးသဖြင့်ကြားဝင်အောင်မြင်စွာမတရားသောနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှတစ်ဦးချင်းစီမှသင်ကြားမှုကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက် /  တိုက်တွန်းပါသည်။ ထို့ပြင်လေ့ပုံမှန်အားဖြင့်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုမှယုတ်လျော့ဆုလာဘ် sensitivity ကိုတဆင့်ထင်ရှားစေခြင်းငှါများနှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှု impact နှင့်လိင် [1, 68] ပူးပေါင်းလိမ့်မည်။ လေ့လည်းပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စှဲ [73-79] တွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။
2014 ခုနှစ်, Kuhn နှင့် Gallinat ဘယ်ဘက် dlPFC နှင့်ညာဘက် VStr အကြားညစ်ညမ်းမရှိသလောက်  .Decreased functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်ကိုကြည့်သင်တန်းသားများကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ, မကြာခဏညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပါဝင်သူတစ်အုပ်စုတွင်ခေါ်ဆောင်သွားဓါတ်ပုံတွေကိုတုန့်ပြန် VStr reactivity ကိုလျော့နည်းသွားလေ့လာသည်။ နံရံပစ်ကစားနည်း-striatal circuity အတွက်ချို့ယွင်းမသက်ဆိုင်ဘဲမူလအလားအလာအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းအတွက်တဏှာ၏ချို့ယွင်းစည်းမျဉ်း [81, 82] ၏မသင့်လျော်သို့မဟုတ်မဲ့ဖြစ်စေသည်အပြုအမူရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းပစ္စည်း [83, 84] ထိတွေ့သည့်အခါ CSBmay နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုလျှော့ချပါပြီ။ Kuhn နှင့် Gallinat ကိုလည်းချဉ်းကပ်-attachment ကိုအပြုအမူတွေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရနှင့်ရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များနှင့်ဆက်စပ်သောထားပြီးဖြစ်သောညာဘက် striatum (caudate နျူကလိယ) ၏မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်, အဆိုး, [80 ကြည့်ရှုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ကြာချိန်နှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ 85, 86] ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ဦးနှောက်ကို Activation လျော့ခြင်းနှင့် longitudinal လေ့လာမှုများသည်အခြားဖြစ်နိုင်ခြေထုတ်ပယ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်ပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓါတ်ပုံတွေကိုမှလေ့တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်။
Prause နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကကောက်ယူ EEG သုံးပြီးတစ်ဦးကလေ့လာမှု, ၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခရောက်နေခံစားရသူကိုတစ်ဦးချင်းစီ, ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ဒုက္ခဆင်းရဲမခံစားရဘူးသူတစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုနှိုင်းယှဉ်ပါကဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကျလာသောပိုမို / သာ. ကြီးမြတ်အမြင်အာရုံဆွလိုအပ်နိုင်ပါသည်ကြောင်းအကြံပြု  ။ Hypersexual သင်တန်းသားများကို-တစ်ဦးချင်းစီ '' ကြုံနေရပြဿနာများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၎င်းတို့၏ကြည့်ထိန်းညှိ '(Mလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေထိတွေ့သည့်အခါ = တစ်ပတ်ကို 3.8 နာရီ) တူညီသောပုံရိပ်တွေထိတွေ့သောအခါနှိုင်းယှဉ်အုပ်စုတစ်စုကိုပြု၏ထက် EEG signal ကိုနှောင်းပိုင်းအပြုသဘောအလားအလာဖြင့်တိုင်းတာလျော့နည်းအာရုံကြော activation () -exhibited ။ (က cue သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်အဖြစ်။ ပိုပြီး Gola et al တွေ့မြင်များအတွက် ) ဒီလေ့လာမှုမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အနက်ပေါ် မူတည်. တွေ့ရှိချက်စှဲ  ည 2015, BANCA နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များအတွက်လေ့သက်ရောက်မှုကိုညွှန်းသည်အခြားလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုထောကျပံ့နိုငျသ CSB နှင့်အတူယောက်ျားဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုပိုမိုနှစ်သက်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ပုံရိပ်တွေ  မှအကြိမ်ကြိမ်ထိတွေ့သောအခါ dACC အတွက်လေ့ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များတွေ့ရှိချက်သရုပ်ပြကြောင်းလေ့လာသည်။ အဆိုပါဖျောပွလေ့လာမှုရလဒ်များမကြာခဏညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအားဖြင့်လိင်နှိုးဆွခံရဖို့ သာ. ကြီးမြတ်ဆွဘို့လိုအပ်ကြောင်းတိုးမြှင့်, ဖြစ်နိုင်သည်တိုးလာလေ့နှင့်သည်းခံစိတ်မှဦးဆောင်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုလျော့နည်းကျဆင်းစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သို့သော် longitudinal လေ့လာမှုများထပ်မံဒီဖြစ်နိုင်ခြေဆန်းစစ်ဖို့ညွှန်ပြနေကြသည်။ အတူတူယူယနေ့အထိ neuroimaging သုတေသနထိခိုက်စေလေ့အပါအဝင်ပြောင်းလဲဦးနှောက်ကွန်ရက်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါး, လောင်းကစားများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းစှဲနှင့်အတူအယူအဆကြောင့် CSB ရှယ်ယာတူညီများအတွက်ကနဦးအကူအညီအထောက်အပံ့များပေးလျက်ရှိသည်။
တစ်ဦး Impulse-ထိန်းချုပ်ရေး Disorder အဖြစ် CSB?
DSM-IV မှာ "အခြားသောခွဲခြားမ Impulse-ထိန်းချုပ်ရေး Disorders" ၏အမျိုးအစား DSM- အတွက် (trichotillomania) သဘာဝပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောခဲ့စဉ်ကတည်းကစွဲလမ်း (လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ) အဖြစ်ပြန်လည်ခွဲခြားခဲ့ကြကြောင်းမျိုးစုံမမှန်ပါဝင်သည်သို့မဟုတ် obsessive-compulsive-related5[89, 90] ။ အဆိုပါ DSM-5 အတွက်လက်ရှိအမျိုးအစား  kleptomania, pyromania, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါအတိုက်အခံခိုင်မာသောစိတ်သဘောရောဂါ, ရောဂါလုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့် antisocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအပါအဝင်ဖြင့်၎င်း၏အာရုံ၌ သာ. တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းဖြစ်လာ, နှောင့်အယှက်, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အမူအကျင့်မမှန်အာရုံစိုက်။ ထဲမှာချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်များ၏အမျိုးအစား ICD-11အများဆုံးသင့်လျော်သောခွဲခြားနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုပြုစုပျိုးထောင်ဤပထမသုံးမမှန်ခြင်းနှင့် CSBD ပါဝင်သည်။ ဤအခြေအနေတွင်ပေးထားဘယ်လို CSBD Impulse ရမ်းခွဲခြားများအတွက်အပိုဆောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားအဖြစ်လက်တွေ့ရည်ရွယ်ချက်များ၏ transdiagnostic Construction မှပြောပြတယ်။
Impulse  တစ်ဦးပါ "ဟုထကြွလွယ်သောတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်အခြားသူများဖို့အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များမှလျော့နည်းသွားနှငျ့ ပတျသကျ. ပြည်တွင်းရေးသို့မဟုတ်ပြင်ပလှုံ့ဆော်မှုမှလျင်မြန်စွာ, unplanned တုံ့ပြန်မှုကိုဦးတည်ဓာတ်" အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ Impulse hypersexuality  နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ Impulse ရိုနှင့်ပြည်နယ်ဝိသေသလက္ခဏာများ [93-97] ရှိစေခြင်းငှါခြားနားသောအမျိုးအစားများ (ဥပမာ, ရွေးချယ်မှု, တုံ့ပြန်မှု) နဲ့တစ်ဦး multidimensional Construction ဖြစ်ပါတယ်။ Impulse ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကို Self-အစီရင်ခံစာမှတဆင့်သို့မဟုတ်တာဝန်များကိုမှတဆင့်အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။ သူတို့ကပင် Impulse ၏တူညီသောပုံစံအတွင်းမှာကိုအားနည်းစွာသို့မဟုတ်မအားလုံးပတျသကျမည် အရေးကြီးတာကသူတို့လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ရလဒ်  မှ differential ဆက်စပ်ပေမည်။ ရှေးခယျြမှု Impulse နှောင့်နှေးလျှော့တာဝန်များကိုမှတဆင့်အကဲဖြတ်စေခြင်းငှါသော်လည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး, ထိုသို့သောရပ်တန့် signal ကိုသို့မဟုတ် Go / No-Go တာဝန်များကိုအဖြစ် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတာဝန်များကိုပေါ်တွင်စွမ်းဆောင်မှုဖြင့်တိုင်းတာတုံ့ပြန်မှု Impulse [94, 95, 99] ။
ဒေတာကို Impulse ၏ Self-အစီရင်ခံစာနှင့်တာဝန်-based အစီအမံအပေါ် CSB နှင့်မပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအကြားကွဲပြားခြားနားမှုအကြံပြု [100-103] ။ ထို့အပွငျ Impulse နှင့်တဏှာ [64, 104] ထိုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးအဖြစ် dysregulated ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလက္ခဏာတွေ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်စပ်ခံရဖို့ပုံရသည်။ ဥပမာ, တဦးတည်းလေ့လာမှု Self-အစီရင်ခံစာနှင့် CSB  ၏လက္ခဏာပြင်းထန်မှုပေါ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာလွှမ်းမိုးမှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူအမူအကျင့်တာဝန်များကိုဖြင့်တိုင်းတာ Impulse ၏အဆင့်ဆင့်၏အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကုသမှု-ရှာကြံနမူနာများအနက်လူများ% 48 မှ 55% Barratt Impulse စကေး [105-107] အပေါ်ယေဘူယျ Impulse ၏မြင့်မားပြလိမ့်မည်။ ဆနျ့ကငျြအခြား data တွေကို CSB များအတွက်ကုသမှုရှာကြံအချို့သောလူနာ Impulse နှင့်အချို့သောအကြားအတော်လေးအားနည်းနေဆက်ဆံရေးအကြံပြုခြင်းအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကြီးများအွန်လိုင်းစစ်တမ်းကနေတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီသောအရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ရုန်းကန်မှုများထက် ကျော်လွန်. အခြားအထကြွလွယ်သောအပြုအမူသို့မဟုတ် comorbid စှဲရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းအကြံပြု CSB (ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု) နှင့်အခြားသူများကို (hypersexuality) နဲ့ပိုမိုအားကောင်းဆက်ဆံရေး [108, 109] ၏ရှုထောင့်။ အလားတူပင်လေ့လာမှုတစ်ခုအတွက်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစီအမံများကို အသုံးပြု. (အပတ်စဉ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု = 287.87 မိနစ်အချိန်ကိုဆိုလိုတာ) နှင့် (အပတ်စဉ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု = 50.77 မိနစ်အချိန်ကိုဆိုလိုတာ) မပါဘဲသူတို့အား Self-ဖော်ပြခဲ့သည် (UPPS-P ကိုအပေါ်ကွဲပြားဘူး Impulse ၏စကေး) သို့မဟုတ်အလုပ်တစ်ခုကို-based (Stop Signal Task ကို) အစီအမံ  .Further, ရိဒ်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များရွေးချယ် (ဆိုလိုသည်မှာတုံ့ပြန်မှုတားစီး, မော်တာအမြန်နှုန်း, functioning အလုပ်အမှုဆောင်၏ neuropsychological စမ်းသပ်မှုအပေါ် CSB ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားခြားနားချက်များကိုစောငျ့ရှောကျဘူး ပင်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်ကို  ကိုချိန်ညှိပြီးနောက်အာရုံစူးစိုက်မှု, သတိဝီရိယ, သိမြင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, concept ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း, ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာကိုသတ်မှတ်) ။ အတူတူ, တွေ့ရှိချက် Impulse hypersexuality မှမဟုတ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနဲ့တူ CSB ၏တိကျသောပုံစံများအားအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လင့်ထားသည်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒါဟာတစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ် CSBD ရဲ့ခွဲခြားအကြောင်းကိုမေးခွန်းထုတ် ICD-11 နှင့် CSB ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ၏တိကျသောအကဲဖြတ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြ။ အချို့သောသုတေသန Impulse နှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါဆင့်ခံဒိုမိန်းအယူအဆရေးရာနှင့် pathophysiological အဆင့် [93, 98, 111] အပေါ်ကွာခြားကြောင်းညွှန်ပြကတည်းကဒါဟာအထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်။
တစ်ဦး obsessive-compulsive-Spectrum Disorder အဖြစ် CSB?
DSM-IV အတွက်အရင်းခံတွန်းအား-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားတစ်ခုမှာအခြေအနေ (trichotillomania)  DSM-90 အတွက် compulsive-obsessive နဲ့ဆက်စပ်ရောဂါအဖြစ် obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) နဲ့ reclassified ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါကဲ့သို့အခြား DSM-IV ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်သီးခြားအမျိုးအစား  ၎င်းတို့၏ခွဲခြား supporting, OCD ကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုပြ။ compulsive  "ထပ်တလဲလဲ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် function သပ္ပါယ် function ကိုမပါဘဲပေးခြင်းသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်အပြုအမူ impairing တစ်ဦးကျပုံစံသို့မဟုတ်လေ့ဖက်ရှင်အတွက်ဖျော်ဖြေ, ဖြစ်စေတင်းကျပ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှတစ်ခုသို့မဟုတ်နည်းလမ်းအတိုင်းအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုရှောင်ရှားဖို့" ကပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း transdiagnostic Construction ဖြစ်ပါတယ်။ OCD compulsive ၏မြင့်မားထားပါတယ်; သို့သော်ဤမျှ  ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်လောင်းကစားရောဂါကဲ့သို့အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုလုပ်ပါ။ အစဉ်အလာ, compulsive နှင့်ထကြွလွယ်သောရောဂါတစ်ရောင်စဉ်၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကြီးစွန်းတိုင်အောင်တလျှောက်တွင်လဲလျောင်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, သို့သော်ဒေတာအများအပြားကိုမမှန် Impulse နှင့် compulsive နှစ်ဦးစလုံး၏အစီအမံ [93, 113] အပေါ်မြင့်မားသောသွင်းယူနှင့်အတူ orthogonal အဖြစ်ဆောက်လုပ်ရေးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ CSB နှင့်စပ်လျဉ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ obsessive လည်းအချိန်ကုန်နှင့်နှောင့်ယှက်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြခြင်းနှင့် OCD ဖို့ဒါမှမဟုတ် OCD-related features တွေ  မှသီအိုရီဆက်စပ်ပေမည်။
အဆိုပါ obsessive-compulsive Inventory -Revised (OCI-R) ကို အသုံးပြု. obsessive-compulsive features တွေအကဲဖြတ်မကြာမီကလေ့လာမှုများ CSB [6, 37, 115] နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားမြင့်တက်မပြခဲ့ပါဘူး။ အလားတူပင်ကြီးမားသောအွန်လိုင်းစစ်တမ်း  ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသာကိုအားနည်းစွာဆက်စပ် compulsive ၏ရှုထောင့်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အတူတကွဤတွေ့ရှိချက်တစ်ခု obsessive-compulsive-related ရောဂါအဖြစ် CSB စဉ်းစားဘို့ခိုင်ခံ့ထောက်ခံမှုမပြကြဘူး။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူအခြေခံအာရုံကြော features တွေဖော်ပြထားနှင့်  မျိုးစုံမမှန်ကိုဖြတ်ပြီးထပ်ပြီ။ နမူနာရှာကြံပိုကြီးတဲ့လက်တွေ့ကုသမှု psychometrically အတည်ပြုခြင်းနှင့် neuroimaging နည်းလမ်းများသုံးပြီးနောက်ထပ်လေ့လာမှုများ CSBD compulsive နှင့် OCD ဆက်စပ်ပုံကိုထပ်မံဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်နေပါသည်။
ထို့ကြောင့်ဝေးအများစု neuroimaging လေ့လာမှုများ CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပွောငျးလဲအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြနှင့်ရလဒ်များကို CSB လက္ခဏာတွေတိကျတဲ့အာရုံကြောဖြစ်စဉ်များ [1, 63, 80] ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အလုပ်တခုကို-based လေ့လာမှုများဒေသဆိုင်ရာ activation နှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာနက်ရှိုင်းခဲ့ကြပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်ချဉ်းကပ်ရာတွင်အသုံးပြုရပါမည်။
White က-သို့မဟုတ်မီးခိုးရောင်-ကိစ္စဆောင်ရွက်မှုများ CSB [102, 116] တွင်လေ့လာခဲ့ပါပြီ။ 2009 ခုနှစ်, Miner နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များပြသပိုမိုမြင့်မားသာလွန်တိုကျရိုကျဒေသမရှိဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီပျံ့နဲ့ပြဆင်းရဲတဲ့တားစီးထိန်းချုပ်မှုကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုတွေ့ 2016 ထံမှ CSB နှင့်မပါဘဲယောက်ျား၏လေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ သာ. ကြီးမြတ်လက်ဝဲ amygdala အသံအတိုးအကျယ်ဟာ CSB အုပ်စုတွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်နှင့်အတော်လေးလျှော့ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပု amygdala နှင့် dlPFC  အကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးအတွက်ဦးနှောက် volumes ကို၏လျှော့ချရေး, တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, hippocampus နှင့် amygdala စိတ်ဖောက်ပြန်သို့မဟုတ်ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် hypersexuality ၏ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်သောခံရဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည် [117, 118] ။ CSB သက်ဆိုင်သော amygdala အသံအတိုးအကျယ်ဤထင်ရသောဆန့်ကျင်ပုံစံများ CSB ၏ neurobiology နားလည်သဘောပေါက်အတွက် Co-ဖြစ်ပေါ်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်စဉ်းစား၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
2018 ခုနှစ်, Seok နှင့် Sohn  CSB အတွက်မီးခိုးရောင်-ကိစ္စနှင့်ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်အတိုင်းအတာဆနျးစစျဖို့ voxel-based morphometry (VBM) နှင့်ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ CSB နှင့်အတူလူတို့သညျယာယီ gyrus အတွက်သိသာထင်ရှားသောမီးခိုးရောင်-ကိစ္စလျှော့ချရေးပြခဲ့တယ်။ Left သာလွန်ယာယီ gyrus (STG) အသံအတိုးအကျယ်အဆိုးဟာ CSB ၏ပြင်းထန်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ, လိင်စွဲလမ်းစစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ်-Revised [SAST] နှင့် Hypersexual အပြုအမူ Inventory [HBI] ရမှတ်များ) [120, 121] ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင် left STG-left precuneus ပြောင်းလဲနှင့်လက်ဝဲ STG ညာ caudate connection လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးရလာဒ်များ CSB ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်လက်ျာ caudate နျူကလိယမှလက်ဝဲ STG ၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအကြားသိသာထင်ရှားသောနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
CSB ၏ neuroimaging လေ့လာမှုများ illuminating ပြီနေစဉ်, နည်းနည်းနေဆဲအထူးသဖြင့်ကုသမှုလေ့လာမှုများသို့မဟုတ်အခြား longitudinal ဒီဇိုင်းများကနေ, ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ Alternative နှင့် CSB တစ်ဦးချင်းစီအကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ တစ်ခြား domains (ဥပမာ, မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု) မှတွေ့ရှိချက်များပေါင်းစည်းမှုလည်းအနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်တွေ့ရှိချက်များကိုတိုက်ရိုက်တိကျတဲ့မမှန်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် transdiagnostic အစီအမံထည့်သွင်းလက်ရှိတွင်ဆဲခွဲခြားခြင်းနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတအားထုတ်မှုအကြောင်းကြားနိုင်ကြောင်းအရေးကြီးသောအချက်အလက်များ၏စုစည်းဘို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
စွဲလမ်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive: ဤဆောင်းပါးအာရုံကြောသုံးအမြင်များထံမှ CSB ၏ယန္တရားများနှင့် ပတ်သက်. သိပ္ပံနည်းကျအသိပညာသုံးသပ်ပြီး။ အများအပြားကလေ့လာမှုများ CSB နှင့်ဤဆုလာဘ်ခန့်မှန်းခေါ်ဆောင်သွားဆုလာဘ်သို့မဟုတ်တွေကိုအဘို့တိုးလာ sensitivity ကိုအကြားဆက်ဆံရေးကိုအကြံပြုနှင့်အခြားသူများ CSB ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှု [1, 6, 36, 64, 66] ကိုတိုးမြှင့် cue-အေးစက်မှဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ လေ့လာရေးကိုလည်း CSB လက္ခဏာတွေမြင့်မားသောစိုးရိမ်စိတ် [34, 37,122] နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကွာဟချက် CSB ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥာဏ်ပညာ၌မတည်ရှိပေမယ့်, (တိုကျရိုကျ, parietal နှင့်ယာယီ cortical, amygdala နှင့် striatum အပါအဝင်) အများအပြားကိုဦးနှောက်ဒေသများ CSB နှင့်ဆက်စပ် features တွေချိတ်ဆက်ပြီ။
CSBD လက်ရှိ version ကို ofthe တွင်ထည့်သွင်းထားသည်ICD-11တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါ  အဖြစ်။ အဆိုပါ WHO ကအားဖြင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့, 'Impulse-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်ထိုကဲ့သို့သောရှည်အဖြစ်အကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းတစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ခုခံတွန်းလှန်မောင်းထုတ်, ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးရေတိုရေရှည်အတွက်လူတစ်ဦးမှအကြိုးကြောင်းတစ်ခုလုပ်ရပ်ဖျော်ဖြေဖို့တိုက်တွန်းဖို့အကြိမ်ကြိမ်ပျက်ကွက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနေကြတယ် သည်တစ်ဦးချင်းစီမှသို့မဟုတ်အခြားသူများအားဖြစ်စေထိခိုက်စေသည့်အပြုအမူပုံစံအကြောင်းကိုဒုက္ခဆင်းရဲမှတ်သား, ဒါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး, မိသားစု, လူမှုရေး, ပညာရေး, လုပ်ငန်းခွင်, ဒါမှမဟုတ်  '' functioning ၏အခြားအရေးကြီးသောဒေသများရှိသိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်း -term ။ လက်ရှိတွေ့ရှိချက် CSBD ၏ခွဲခြားနှင့် ပတ်သက်. အရေးကြီးသောမေးခွန်းတွေတင်ပြထားတယ်။ ချို့ယွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအတော်များများမမှန်တခြားနေရာထဲမှာခွဲခြားထားပါသည် ICD-11 (ဥပမာ, လောင်းကစား, ဂိမ်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်စွဲလမ်းပုံမမှန်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်)  ။
လောလောဆယ် CSBD တစ်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောရောဂါပါဝငျနှင့် CSBD စံ၏နောက်ထပ်သနျ့တစ်ဦးချင်းစီအဘို့ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှော [33, 108, 124] ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအချို့အရာ၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲ, အကြားခွဲခြားသင့်ပါတယ်။ CSBD အတွက်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအစိတ်အပိုင်းအတွက်လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးသိသာသောပေုံကှာဟရှင်းပြစေနိုင်သည်။ neuroimaging လေ့လာမှုများ CSB နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုအကြားမျိုးစုံတူညီရှာတွေ့သော်လည်း, နောက်ထပ်သုတေသနအပြည့်အဝ neurocognition အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို Subtype မှလေးစားမှုနှင့်အတူ CSB ၏လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများဆက်စပ်ပုံကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကွိမျမြားစှာလေ့လာမှုများသည်အခြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ယေဘုယျကန့်သတ်ရသောညစ်ညမ်း၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုအပေါ်သီးသန့်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ ထို့ပြင် CSB သုတေသနသင်တန်းသားများအဘို့အပါဝင် / ဖယ်စံကိုလည်းလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးယေဘုယျနှင့်နှိုင်းယှဉ်နှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုပြုစုပျိုးထောင်, လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြားကြသည်။
အများအပြားကန့်အသတ်ဖြင့်လက်ရှိ neuroimaging လေ့လာမှုများမှလေးစားမှုနှင့်အတူမှတ်ချက်ချရပါမည်နှင့်အနာဂတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ (စားပွဲတင် 1 ကိုကြည့်ပါ) စီစဉ်သည့်အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရလိမ့်မည်။ တစ်ဦးကမူလတန်းန့်အသတ်အကြီးအကျယ်, အဖြူရောင်အထီးနှင့်လိင်ကွဲဖြစ်ကြောင်းသေးငယ်တဲ့နမူနာအရွယ်အစားပါဝငျသညျ။ ပိုများသောသုတေသန CSB နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားတွေကိုအရှေ့တိုင်း၏တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမများ၏ပိုကြီးတဲ့, လူမျိုးစုကွဲပြားခြားနားနမူနာစုဆောင်းဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အဘယ်သူမျှမစနစ်တကျသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများအမျိုးသမီး CSB ၏ neurocognitive ဖြစ်စဉ်များစုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများ CSB [25, 30] နှင့်အတူလက်တွေ့လူဦးရေအတွက်ကျားမ-related ကွဲပြားခြားနားမှုအကြံပြုထားတဲ့ယောက်ျားနှင့်အခြားဒေတာများကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကအမျိုးသမီးတွေအတွက် သာ. ကြီးမြတ် psychopathology မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse ချိတ်ဆက် data တွေကိုပေးထားလိုအပ်နေပါသည်။ စှဲနှင့်အတူအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများစွဲလမ်းအပြုအမူတွေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-cue Response အတွက်ပြပွဲကွဲပြားခြားနားမှုမြားတှငျပါဝငျခွငျးအဘို့အ (အပြုသဘောအားကောင်းနှိုင်းယှဉ်အနုတ်လက္ခဏာနှင့်စပ်လျဉ်းဥပမာ) ကွဲပြားခြားနားသောတွန်းအားကိုသရုပ်ပြဖြစ်နိုင်သည်နှင့်အမျှအနာဂတ် neurobiological လေ့လာမှုများကျား-ဆက်စပ်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များနှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်များထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ် ယင်းအတွက်၎င်း၏လက်ရှိပါဝင်ပေးထား CSBD ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ ICD-11 တစ်စိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါ [125, 126] အဖြစ်။
အလားတူပင်ဤအုပ်စုများအကြား CSB ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုရှင်းလင်းဖို့တိုင်းရင်းသားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်စနစ်တကျသုတေသနပြုဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းရှိသေး၏။ CSB များအတွက်စိစစ်မှုတူရိယာအများအားဖြင့်အဖြူရောင်ဥရောပယောက်ျားအပေါ်စုံစမ်းအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်လက်ရှိလေ့လာမှုများလိင်ကွဲယောက်ျားအပေါ်လွှမ်းမိုးအာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားမိန်းမတို့အကြား CSB ၏လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆန်းစစ်ပိုများသောသုတေသနလိုအပ်ပါသည်။ တိကျတဲ့အုပ်စုများ (Transgender များ, polyamorous, kink အခြား) နှင့်လှုပ်ရှားမှုများ (အခြားညစ်ညမ်းကြည့်, compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ပေါ့ပေါ့အမည်မသိလိင်,) ၏ Neurobiological သုတေသနလည်းလိုအပ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောန့်အသတ်ပေးထားလက်ရှိရလဒ်တွေကိုသတိအနက်ရပါမည်။
သည်အခြား Non-ပုံရိပ်ပုံစံများ၏ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း (ဥပမာ, မျိုးရိုးဗီဇ, ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု) နှင့်အခြားပုံရိပ်ချဉ်းကပ်၏အသုံးပြုမှုသည်အတိုင်းတိုက်ရိုက်သည်အခြားရောဂါများနှင့်အတူ CSBD ၏နှိုင်းယှဉ် (ဥပမာ, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း, လောင်းကစား, ဂိမ်းနှင့်အခြားရောဂါများ), လိုအပ်ပါသည်။ positron ထုတ်လွှတ် tomography တူသောနည်းစနစ်လည်း CSBD ၏ neurochemical ကျောထောက်နောက်ခံသို့အရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုငျသညျ။
CSB ၏သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောကိုလည်းအာရုံစိုက်အုပ်စုတစ်စု ordiary အကဲဖြတ်နည်းလမ်းများ  တူသောအရည်အသွေးသုတေသနကနေအစိတ်အပိုင်းအတွက်ရရှိသောစေခြင်းငှါလက်တွေ့အင်္ဂါရပ်များသတိထားအကဲဖြတ်မှတဆင့်ရှင်းလင်းနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောသုတေသနလည်းပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ, ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများသို့ neurocognitive အကဲဖြတ်ပေါင်းစပ် neurobiological ယန္တရားများသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုငျမလားဆိုတာတူသော longitudinal မေးခွန်းများကိုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးနိုငျသညျ။ ထို့ပြင်အမူအကျင့်များနှင့် pharmacological ကြားဝင်တရားဝင် CSBD ကုသမှာသူတို့ရဲ့ထိရောက်မှုတို့အတွက်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်, neurocognitive အကဲဖြတ်၏ပေါင်းစည်းမှု CSBD နှင့်အလားအလာ biomarkers များအတွက်ထိရောက်သောကုသမှု၏ယန္တရားများဖော်ထုတ်ရန်ကူညီနိုင်ဘူး။ ဒါကနောက်ဆုံးအချက်ထဲမှာ CSBD များ၏ပါဝင်နေသောကြောင့်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည် ICD-11 ဖြစ်နိုင်ဖွယ် CSBD များအတွက်ကုသမှုရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီ၏နံပါတ်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ ထဲမှာ CSBD ၏အထူးသဖြင့်ပါဝင် ICD-11 လူနာပံ့ပိုးနှင့်အခြားသူများအတွက်အသိပညာပေးများနှင့်အလားအလာလက်ရှိ CSBD များအတွက်တည်ရှိစေခြင်းငှါအခြားအအတားအဆီးတွေ (အာမခံပေးသူထံမှဥပမာငွေကြေးပြန်လည်) ကိုဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်။